Lafti qonnaa Gofooree fi Seeroftaa (hektaara 14,000) ummata naannoof qoodamuu malee mootummaan qotamuu hin qabu! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsLafti qonnaa Gofooree fi Seeroftaa (hektaara 14,000) ummata naannoof qoodamuu malee mootummaan qotamuu hin qabu!
Barsiisaa HIRKIISAA NAGARAA jedhama GHGW Magaala Haratoootti badii tokko malee Humnoota Mootummaan hidhame.
Yaa warra PP qabsaa’ota akka sibiilaa waan nuu baay’istaniif “itti jabaadhaa” jenna.
Bilisummaan Oromoo dhugaa dha!
Nesru Hassen —Lafti qonnaa #Gofooree fi #Seeroftaa (hektaara 14,000) ummata naannoof qoodamuu malee mootummaan qotamuu hin qabu!
Lafti qonnaa #Gofooree fi #Seeroftaa (hektaara 14,000) ummata naannoof qoodamuu malee mootummaan qotamuu hin qabu!
Mootummaan ummata humnaan buqqisee #Arsii fi #Baale keessatti qonna mootummaa babadhaa kanniin akka Sinaanaa, Seeroftaa, Heeraroo, Gofooree, Xameela, Garaadela, Ardaa Etaa, Hunxee, Roobe, Addeellee, Arbaguuguu, Shaalloo fi Lolee hundeesse. Tarkaanfii mootummaa kanaan Oromoon Arsii barootaaf buqqa’ee, lafa qonnaa fi loon irratti bobbaafatu dhabee dhiphataa fi rakkataa jiraate.
Ummanni humnaan, beenyaa tokoon maletti, lafa badhaa fi gabbataa irraa buqa’us, faaydaan biyyi lafa qonnaa kanniin irraa argataa turte xiqqaadha. Sababni isaas qonni mootummaa kun madda saamichaa fi mismanagement waan turaniif. Qonni kunniin mootummaa kasaaraaf saaxilaa ture waan jedhuun mootummaan Woyyaanee lafa qonnaa kanniin mootummaa #Jibuutii fi biyyoota #Arabaaf laatee ture. Qabsoo ummataan lafti kunniin afaan Arabaa fi Alamudiiniitii bu’e. Amma garuu, warri dogoggora irraa hin barannee fi gaafii ummataaf dhimma hin qabne, gaafii fi dantaa ummataa dalgatti jechuudhaan lafa qonnaa #Seeroftaa, #Gofooree fi #Shaalloo qochisiisutti deebi’an.
Gaafiin ummataa inni yeroo dheeraa lafti kun ummata naannoo kan rakkoo lafa qonnaa qabuuf haa qoodamuudha. Kun osoo ta’ee faaydaa heddu qaba:
1. Dargaggeessi lafa qonnaa argata.
2. Gaafii fi komii ummataa barootaa dhagayuu. Ummata woggaa hedduuf lafa isaa irraa beenyaan male buqqa’e qe’etti deebisuu ta’a.
3. Omishtummaan ni dabala. Lafti kun mootummaan osoo hin taane qotee bulaan yoo qotame bu”aa irra caalu argamsiisa.
Walumaa galattii lafti kun kan ummata naannooti. Kaleessa mootummaan humnaan lafa fudhatee ummata hiyyummaa keessatti hanbise. Dogoggorri kaleessaa sirrattuu malee itti fufuu hin qabu.
Amma ummanni naannoo, keessattuu dargaggeessi, rakkoo lafaa qaba. Lafti qonnaa kun ummataaf malee mootummaaf hin malle. Komii fi gaafii ummataa dalgatti jedhanii lafa kana qotuu eegaluun tuffiin mootummaan Abiyyi ummata irraa qabu cimaa ta’uu isaatiif agarsiisa biraati. Bakka mootummaan gurra hin laannetti ummanni cal jedhee ilaaluu hin qabu. Qonna dhaabsisuun rakkisu, akka hin haamanne taasisuun fala biraa ta’uu mala.
Ofarguun gammachuu dha
Afaan, aadaa, eenyummaa, jiruu fi jireenya, mallattoo, faajjii, asxaa, sansakkaa fi danaa Oromoo ardaa, waltajjii, fi miidiyaa irratti arguu caala waanti na gammachiisu hinjiru.
Ofi-hin dhabiinaa; of-argadhaa!